Zvese Mune Imwe / Retail LED Poster
Kunze Kwakagadziriswa LED Screen Sign
Kunze Simba Kuchengetedza LED Ratidza
Pamberi Kuchengetedza LED Ratidza
Indoor Yakagadziriswa LED Ratidza
Stage Rental akatungamirira Ratidza
Transparent LED Screen / Yakatarisana Curtain LED Ratidza
Nhandare Perimeter Sport LED Screen
Inopindirana Kutamba Floor LED Ratidza
Smartshelf LED Bhenji Ratidza
Usazviomesera / Creative Soft akatungamirira Display
Akatungamirira Module Ratidza
Akatungamirira Ratidza Accessories
Plug inotamba yakatungamira poster
HD Yakatetepa pixel kukanda
Kunze kwakagadziriswa kwakatungamira kuratidza
Stage rental yakatungamira kuratidza
Smartshelf yakatungamira mutengo tag
Zvizhinji zveP1.56 smartshelf yakatungamira yekuratidza mutengo tag bhar pasi pekukwegura kwakanaka kugadzirira kuendesa kumutengi wedu
ne admin pane 21-10-18
Mazana esmarthelf akatungamira ekuratidzira mutengo tag tag pasi pekukwegura zvakanaka yakagadzirira kuendeswa kumutengi wedu. P1.56 ine 600mm, 900mm, 1200mm akasiyana ehukuru akabatanidzwa kuisirwa kuti aenzane nemusika pasherefu urefu hunoda. Inovandudza COB (Chip Pane Bhodhi) LED inoratidzira kunyorera kwesupamaketi, yakanakisa resolutionuti ...
Kupfuura 3000pcs if3.076-3216 yakatungamira module kuratidza ine tsime kugadzirwa uye kuchembera kununurwa
ne admin pane 21-10-09
Kufambira mberi kwekugadzirwa kwe if3.076-3216 led module kupfuura 3000pcs mhinduro kune edu mutengi nenguva. Mhangura waya yakatungamira chip nhema dema ine yakakwira musiyano mask inotungamira module inounza zvirinani ruvara kusagadzikana vhidhiyo kuita. Hunhu hwesimbi yekutengesa sodha uye chaiyo SMT iri im ...
P1.56 HD LED Inoratidza Yakatetepa Pixel Pitch Fine Pitch LED Videowall
Yonwaytech p1.56 yemukati HD yakatungamidzwa kuratidzwa ichangopedzwa uye kuvhenekera nemvumo yemutengi wedu zvakanaka muhotera yavo. 15X9 inoisa 600mmX337.5mm p1.56 yakatetepa pikisi pani 16: 9 yakatungamira pani ine musono rusvingo yakakwira. 4K resolution 5760dotsX1947dots ita chokwadi ...
P1.95 Indoor Slim LED Ratidza 500mm × 500mm Yekutengesa Dhijitari LED Screen
Kupfuura 300pcs 500mm x 500mm p1.953 yemukati diki namo yakatungamira screne pasi pekukwegura. Nationstar goridhe waya yakatungamira machipisi akagadziriswa CE akasimbiswa magetsi magetsi pamwe ne3840hz yekuzorodza mwero inounza yakajeka vhidhiyo mabiko. 500mm x 500mm x 60mm madziro akaisirwa yakananga kurema uremu yakatungamirwa pani. Modular ...
Yakanakisa mhando yekunze P3.91 yakatungamirwa kuratidza uye yakavimbika sevhisi inogona kukodzera mutengi kuvimba
Yakanakisa mhando yekunze P3.91 yakatungamirwa kuratidza uye yakavimbika sevhisi inogona kukodzera mutengi kuvimba. Zvinopfuura makumi matanhatu seti yekunze p3.91 yekumusoro magumo kumisikidzwa yakatungamira kuratidzwa yakagadzirira kuendesa kune yedu Mexico mutengi. Nationstar 1921 SMD yemhangura waya LED machipisi ndiwo akakura elem ...
P1.8 / P2.0 / P2.5 Indoor Mberi Service LED Poster Ratidziro Pane Yako Yekutanga Nyore.
Munguva ichangopfuura, yega yega yedhijitari mutambi anotarisa yakakwirira resolution yakatungamirwa kuratidza nekuti zuva nezuva zuva ne LED kuratidza tekinoroji uye yekuratidzira yemusika kudiwa kwave kuri kuwedzera. P2.5 Indoor Mberi Service LED Poster kuratidza kwave kwakakurumbira kwazvo nekuda kwayo kwakawanda resolution uye kupenya. Zviri ...
20 seti Yakakwira-kumagumo plug uye kutamba dhijitari yakatungamirwa posita ine yakajeka vhidhiyo kukwegura yakagadzirira kuendesa.
20 seti Yakakwira-kumagumo plug uye kutamba dhijitari yakatungamirwa posita ine yakajeka vhidhiyo kukwegura yakagadzirira kuendesa. Yakagadzirirwa neyakavimbika nyikastar mhangura yakatungamira machipisi mumhepo inofamba inofamba inogona kufambiswa nyore neruoko rumwe. P2.5mm muna 80 ″ 640mm × 1920mm R ...
IP65 yemvura yekuyedza kuyedzwa pamwe nekurova vibration bvunzo kuona mhando yakatungamirwa kuratidzwa kumutengi wedu.
Rakareruka asi rinoshanda humbowo hwemvura uye nzira yekuyedza vibration yekuona kuti yedu yekunze p3.91 LED inoratidzira inogona kuendeswa kune vedu vekuEurope vatengi zvakakwana. Sezvo iwe uchiziva kuti iyo LED inoratidzira kunyanya iyo yekunze rendi yakatungamirwa kuratidza. Yakatarisana nemijenya yekuisirwa uye disasse ...
Yakareruka asi inoshanda nzira yekuyedza kuona kuti yedu yekunze p3.91 LED kuratidza kunogona kuendeswa kune vedu vekuEurope vatengi zvakakwana.
ne admin pane 21-06-14
Kupfuura 50 sqm P3.91 yepamusoro yekumisikidza gadziriso yakatungamira kuratidzwa yakagadzirira kuendesa kune yedu EU mutengi zvakare mwedzi uno. Nationstar 1921 SMD yemhangura waya LED machipisi ndiwo akakosha eiyo mhando yakatungamirwa skrini. 3840hz yekuvandudza mwero inounza yakajeka vhidhiyo mabiko. CE vanopupurirwa po ...
COB Smartshelf P1.5625 LED Banner Yakagadzirira Kuendesa Kune Wedu Germany Mutengi.
Smartshelf LED mabhana anoratidza akagadzirira kuendesa kune yedu EU mutengi. P1.5625 COB shefu yeUSB banner ine yakanakisa yakajeka vhidhiyo kuita. Yakakwira mhando, Ultra-yakakwira resolution, 10000: 1 Ultra-yakakwira kusiyanisa muyero, yakanyatso tungamirwa pasherefu skrini. Mberi isapinda mvura, Anti-kudhumhana, Anti-kunofambira mberi, Anti-guruva uye ...
Ungasarudza Sei Inokodzera & Yakavimbika Poster LED Ratidza?
Ungasarudza Sei Inokodzera & Yakavimbika Poster LED Ratidza? Kutanga: Chii chinonzi Poster inotungamirwa skrini? Chikwangwani cheLED rudzi rwekuratidzwa kuratidzwa, asi zviri nyore mukushanda nepuraki uye kutamba basa, asi zvakareruka huremu uye nyore kutakurika neiri vhiri base ichienzaniswa nerev ...
Mhando ye if3.91 yemukati yakatarwa aruminiyamu yedhijitari yemadziro mapepa akatungamirwa mapaneru akagadzirira kuunzwa kune vedu Italy mutengi.
Mhando ye if3.91 yemukati yakatarwa aruminiyamu yedhijitari yemadziro mapepa akatungamirwa mapaneru akagadzirira kuunzwa kune vedu Italy mutengi. Nationstar yakatungamira machipisi yakagadzirirwa CE yakasimbiswa MW magetsi emagetsi akaisirwa 3840hz mwero wekuzorodza unounza yakajeka vhidhiyo mabiko. 750mm * 250mm * 60mm madziro akatasva zvakananga mwenje huremu yakatungamirwa pani. & nbs ...